Ukuseta iiNyuso zoMlilo ngeWildFire
NgoLwesithathu, Julayi 21, 2010 NgoLwesibini, Oktobha 4, 2011 Lorraine Ibhola
Abathengisi bobabini bayayithanda kwaye bayayithiya i-sweepstake kunye nokhuphiswano. Ngelixa izixhobo ezisebenzayo zokwakha ulwazi lwebrand kunye nokuvelisa uluhlu lwethemba, ziyadinisa, zichitha ixesha, kwaye zinomngeni wokuzilawula. Ke nini UDaniel Herndon weRed Wall yeza nembono eyoyikisayo yokubuyela kunyuselo lwesikolo kumxhasi wethu UGqr Jeremy Ciano weRev RevolutionEyes Ndonwabile ngalo mbono, kodwa ndinexhala lokuphunyezwa.
Abazali bangenisa iifoto zabantwana babo benxibe iiglasi kunye nezibuko zelanga
Emva koko bafumana abahlobo babo kunye nosapho ukuba bavote.
Umntwana oneevoti ezininzi uphumelela ukukhwela ihelikopta, amatikiti kumdlalo we-Ice kunye nokukhwela kumatshini we-zamboni, nangasemva kwezokhenketho lwezigcawu
Iinjongo emva kokhuphiswano, akukho lula kangako:
Ukuqokelela imifanekiso esinokuyisebenzisa ukwakha ulwazi ngoqheliso lwabantwana
Yakha abalandeli bephepha le-facebook
Qokelela iidilesi ze-imeyile
Abaphathi baboyikisa. Kodwa lo ngumda we-intanethi kunye ne-iPhone, kwaye kuhlala kukho "iApp" yalonto. Kule meko isicelo si mlilo. Into endiyithandayo Ngokusebenzisa umlilo wasendle:
Kwakulula kakhulu ukwakha eli phulo. (Kuxhomekeke kubungakanani bexesha ofuna ukulichitha kwimizobo onokuphakama ungaphantsi kweyure)
Besinokukhetha: I-Sweepstakes, amakhuphoni, iifoto kunye nokhuphiswano lwesincoko
Ukufaka ngokulula kwiphepha le fan.
I-Facebook ayifuneki -Umlilo wasendle ubonelela nje ngewijethi yewebhusayithi kunye nemicrosite onokuthi ubalathise kuyo abo bakhuphisana nabo.
Ujongano olulula lomsebenzisi lwenza kube lula kubantu ukuba bameme izihlobo zabo kwaye bandise ukhuphiswano.
Ixabiso lisengqiqweni. Kuxhomekeke kubude bephulo, kunye nenani lokwenza ngokwezifiso olifunayo, uhlahlo-lwabiwo mali lwakho luya kuba sisiqwengana sento ebisetyenziselwa ukuqhuba inkqubo enje. (Uhlahlo-lwabiwo mali lukaGqirha Ciano uchithe malunga ne- $ 200 kule nkqubo yeeveki ezintandathu)
Into endingayithandiyo ngomlilo wasendle: (Jongana nayo, akukho nto igqibeleleyo)
Ukungeniswa kube nye kuphela kwikhompyuter- ndiyasiqonda isizathu, kodwa oku kuyasithintela ekusayineni abantu njengoko besiza kwi-ofisi kaGqirha Ciano. Ngelixa sinika izikhumbuzo, ayinguye wonke umntu oya kugoduka ayenze. (emva kokuba ndibhale le posi, sifumene indlela yokunyusa inani lokungeniswa, ke enye into encinci esingayithandi)
Sinokubamba ii-imeyile zabo bonke abantu abangenisayo, kodwa ayinguye wonke umntu ovotayo. Isibonelelo sokwenyani seli phulo kukwandisa uluhlu lweposi. Ke sifuna o bazali KUNYE nabo bonke abahlobo babo kunye namalungu osapho. Ukufezekisa oku, siya kutshintshela kwi IFomstack ukuvota
Okukwintsusa… Ndinovuyo ngomlilo wasendle, kwaye ndiza kuvavanya inani lokwahluka kwabathengi kwiinyanga ezizayo. Kuquka ezethu: Ukwenziwa kwekhadi leBiz Ngaba usebenzise umlilo wasendle? Ngawaphi amava onawo ngale mveliso?
Ungalibali uku - ngenisa umntwana wakho okanye umzukulwana ukuphumelela a ukukhwela kwihelikopta, umatshini weZamboni kunye nokunye!
tags: intengiso yevidiyo
Ixabiseka nini i-SEO eyi- $ 100 yezigidi?
Ukubawa, uloyiko kunye noosomashishini abangaphumelelanga